वीरमा पोस्ट कोभिड क्लिनिकको सुरूवात, डा. बस्नेत भन्छन् – कुनै बिरामी फर्किनुपर्दैन – Health Post Nepal
वीरमा पोस्ट कोभिड क्लिनिकको सुरूवात, डा. बस्नेत भन्छन् – कुनै बिरामी फर्किनुपर्दैन
२०७८ भदौ २ गते १७:१४
कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रिय अस्पताल (वीर) ले कोभिड निको भइसेकाहरूको स्वास्थ्यमा आउनसक्ने समस्या र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी ‘पोस्ट कोभिड’ क्लिनिकको सुरुवात गरेको छ ।
अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. भुपेन्द्र बस्नेतले मंगलबारबाट पोस्ट कोभिडको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए।
‘हामीले हिजोबाट पोस्ट कोभिडको सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं। पिसिआर ल्याबको सेवा पनि २४ सै घन्टा केही दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने छौं,’ डा. बस्नेतले भने।’
कोभिड ठीक भएपछि पनि स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउने क्रम बढेर गएको निश्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता बिरामीहरुको मात्र उपचार गर्ने उद्देश्यले अस्पतालले डेडिकेटेड विशेषज्ञसहितको पोस्ट कोभिड क्लिनिक संचालनमा डा. बस्नेतले बताए।
कोभिड ठीक भएको लामो समयसम्म पनि धेरैलाई सामान्य शारीरिक समस्या हुँदा नै थकाई लाग्ने, छाति दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, डिप्रेसन हुने, ब्लडप्रेसर हुने, हिडँ्रदा स्वाँ स्वाँ हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरु देखिने गर्छन ।
यस्ता समस्या हुनेहरुले कोभिड क्लिनिकमा आएर स्तरीय उपचार सेवा लिनसक्ने उनको भनाई छ।
वीरले हाल कोभिड तथा नन कोभिड बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ।
हाल दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा नन कोभिडका बिरामीले सेवा लिइरहेका डा. बस्नेतले जानकारी दिए।
हाल वीरमा कोभिडका २३० बेड सञ्चालनमा छ। जसमा ५५ आइसियू र अन्य ८१ एचडियू बेड छन्।
बुधबार १०४ जना भर्ना भएर उपचार लिइरहेका छन्।
३ सय जनर्रल बेडको लागि काम अगाडी बढाइएको डा. बस्नेतले बताए।
‘जनर्रल बेड खाली आधा भन्दा खाली छ। एचडियू बेड केही खाली छ भने आइसियू बेड भरिभाउ भएका छन्। तर, हामी बेड संख्या बढाएर सेवा दिन सक्छौं। अस्पतालका आएका बिरामीलाई नर्फाउने गरी सेवा विस्तार गर्दै लगेका छौं,’ उनले भने।’
डा. बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा भएका अस्पताल र प्रदेश अस्पतालसँग समवन्य गरेर काम गरेको बताए।
2 thoughts on “वीरमा पोस्ट कोभिड क्लिनिकको सुरूवात, डा. बस्नेत भन्छन् – कुनै बिरामी फर्किनुपर्दैन”
Thanku, dr. Bhupendra Basnet